ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကို ရခိုင်သို့ သွားရောက်လေ့လာရန် မြန်မာ ခွင့်ပြု
လေတပ်လေယာဉ်တစ်စီး တောင်ငူအနီးပျက်ကျ၊ လေယာဉ်မှူး သေဆုံး
တောင်ငူလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှ လေ့ကျင့်ပျံသန်းနေသည့် အက်ဖ်-၇ လေယာဉ်တစ်စီး ယနေ့နံက်ပိုင်းက ပျက်ကျသွားခဲ့ရာ လေယာဉ်မှူးသေဆုံးသွားသည်ဟု တပ်မတော်က ပြောကြားသည်။
အီတလီနိုင်ငံထုတ် Ducati မော်တော်ဆိုင်ကယ် အရောင်းပြခန်း မန္တလေး၌ ဖွင့်လှစ်
အီတလီနိုင်ငံထုတ် Ducati မော်တော်ဆိုင်ကယ်၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးသော အရောင်းပြခန်းကို မန္တလေးမြို့တွင် ဧပြီ ၂ ရက်နေ့က ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကာ မော်တော်ဆိုင်ကယ် မော်ဒယ်မျိုးစုံအား ဝယ်ယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ “ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံး မော်တော်ဆိုင်ကယ် တံဆိပ်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည့် Ducati အား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုယ်စားပြုရသည်မှာ အလွန်ပင်.
ရိုဟင်ဂျာများ လိုက်ပါလာသည့် လှေတစ်စီး ထိုင်းကျွန်းတစ်ခု၌ ရပ်နား
မလေးရှားနိုင်ငံကို ဦးတည်သွားရောက်ကြမယ့် ရိုဟင်ဂျာ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာပါတဲ့ လှေတစ်စီးဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ကျွန်းတစ်ခုမှာ ခေတ္တရပ်နားခဲ့တယ်လို့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေက ဧပြီ ၁ ရက်နေ့မှာ ပြောပါတယ်။
သမ္မတ၏ အာဏာစက် ထပ်ဖြည့်ပေါင်းဖို့အတွက်
နိုင်ငံတော်အင်္ဂါစဉ်မှာတော့ ၂၀၁၆ -၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း သက်တမ်းသတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ရာထူးဟာ နိုင်ငံသားအားလုံး၏ အထွတ်အထိပ်နေရာအဖြစ် အခြေခံဥပဒေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ သမ္မတရဲ့အောက် ဒုတိယနေရာက ရှိပါတယ်။
“စုပေါင်းအင်အား” ဖြင့် နိုင်ငံ၏ စိန်ခေါ်မှုကြီးများကို ကျော်ဖြတ်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
လာမည့် မြန်မာနှစ်သစ်ကူးကာလတွင် “စုပေါင်းအင်အား”ကို အလေးထားပြီး နိုင်ငံ၏ စိန်ခေါ်မှုကြီးများကို ကျော်ဖြတ်ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ချလိုက်သည်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဧပြီ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားသည်။
မြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် ရန်ကုန်မြို့သစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလိမိတက်ကို တိုင်းအစိုးရ ထူထောင်
ရန်ကုန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကို စတင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့သစ် ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီလိမိတက် (NYDC) ကို ဖွဲ့စည်းထူထောင်လိုက်ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ယနေ့ ကြေညာလိုက်သည်။ ရန်ကုန်မြစ်အနောက်ဘက်ရှိ မြေနေရာကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေး၊ နေအိမ်များနှင့် အလုပ်အကိုင်များ တိုးတက်လာစေရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး စီမံကိန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက ထိုဒေသသည် စင်ကာပူနိုင်ငံ.
ရိုဟင်ဂျာအကြပ်အတည်းနှင့်အတူ စိတ်ကြွဆေးအန္တရာယ်ကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့် ကြုံတွေ့နေ
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ အလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက်လာမှုနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံမှ မှောင်ခိုတင်သွင်းလာမှုများ တိုးပွားလာသည့်အတွက် သုံးလမကျော်သေးသည့်အချိန်အတွင်းမှာပင် စိတ်ကြွဆေး အလုံးရေ ကိုးသန်းနီးပါးကို ဘင်္ဂလားဒေရှ့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ပြောကြားသည်။